Ugcino lweeuropetravel | Gcina A Isitimela
ekhaya > europetravel
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu IYurophu inenkcubeko etyebileyo kakhulu kunye nembali, ukuyenza indawo yokundwendwela ethandwayo phakathi kwabahambi abaphezulu. Imyuziyam, zokulondoloza, Iimpawu zomhlaba ezinomtsalane, kunye nokukhethwa kwezinto ezahlukeneyo zokutyela. Kufuphi, ukuba uthathe umhlala-phantsi zininzi iindlela ezintle zokuzonwabisa kuso nasiphi na isixeko…
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Train Travel The Netherlands, Iingcebiso zokuhamba, ...
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu ciao! Zibone uhlela uhambo elinqabileyo ebomini ku Italy! Yeyona awazalelwa kuyo ngokutsha kunye isixeko izithembiso ukuba elate kwaye ungakukhuthaza ngenxa yemisebenzi yabo yobugcisa, bokwakha, kunye nothando lwayo ehambelana nokutya. I-Itali likhaya eliyinyani…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Kwihlabathi liphela, Ukupakisha kuneziphumo ezahlukeneyo nezenzo, umzekelo: Ukucebisa eMzantsi Afrika kuyafuneka, njengoko kunjalo e-USA. Kulindeleke ukuba ushiye inqaku phakathi 15 yaye 25% eMelika, kwaye ukuba awukwenzi njalo…
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu Ukukhulelwa lelinye lawona maxesha amnandi ebomini bakho. Iya, kunjalo, yiza nezithintelo ezithile. Ngokukodwa ukuba ucwangcisa ukuhamba xa ukhulelwe. Ukuthwala kunye nokwakha umntwana kukhawulelana nohlobo lokuhamba ongalusebenzisa ukuze ujikeleze, ingakumbi xa…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Ngokuqhambuka kwangoku kwe-coronavirus (Covid-19) baphosa zohambo wonke zibe dlakadlaka, kunokuba nzima ukwazi ukuba kufuneka ugcine iholide yakho ngexesha coronavirus okanye. While we can’t make that decision for you if you do choose to continue on it’s…